बुद्धि तामाङको ६५ वर्षीय वृद्ध अनुभव | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
बुद्धि तामाङको ६५ वर्षीय वृद्ध अनुभव
कात्तिक १९, २०७५ सोमबार १२:५१:२६ | उज्यालो सहकर्मी
बुद्धि तामाङ पछिल्लो समयका निकै चर्चित हास्य कलाकारहरु मध्येका एक हुन् । हास्य टेलिचलचित्र मेरी बास्सैबाट दर्शकमा चिनिएका उनी अहिले ठूलो पर्दामा व्यस्त छन् । एक पछि अर्को चलचित्रमा व्यस्त हुँदै गएका बुद्धि महंगो पारिश्रमिक लिने हास्य कलाकार मध्यका एक हुन् ।
उनले २०६२ सालमा डबली थिएटरबाट नाट्ययात्रा सुरु गरेका थिए । डबली थिएटर मै रहेर उनले आफ्नो अभिनय कौशलतालाई अघि बढाएका थिए । उनी त्यस समय सडक नाटकमा निकै व्यस्त मानिन्थे । डबली थिएटरमा रहेर करिब ४ वर्ष काम गरे पछि एक्टर्स स्टुडियोमा काम सुरु गरे र आफ्नो अभिनय यात्रा अघि बढए । बुद्धि तामाङ अनुप बरालका विध्यार्थी हुन् । उनले अनुप बरालसँग अभिनयको तीन महिने प्रशिक्षण लिएका थिए ।
तीन महिनाको तालिम लिए पश्चात उनको अभिनय यात्रामा पहिले भन्दा निखारता आउन थाल्यो । तालिम लिइ सके पश्चात उनले अभिनय गरेको पहिलो नाटक ‘मलामी’ हो । ‘मलामी’ प्रोसिनियम थिएटरमा काम गर्न थाले पश्चातको पनि पहिलो नाटक थियो । ‘मलामी’ नामक नाटकमा उनले ६५ वर्षका वृद्धको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यो उनको पहिलो अनुभव थियो । सुरुमा त उनलाई नसक्ने पो हो कि भन्ने पनि लागेको थियो । त्यस नाटकका निम्ति उनले वृद्ध मानिसको हाउभाउ शैलीलाई अभिनयमा उतार्नु पर्ने थियो ।
उनीहरुको हिड्ने, खाने, बोल्ने, बस्नेलगायतका कुराहरुलाई नाटकमा उतार्नु निकै चुनौती थियो । सुरुमा त आँट गर्न सकेनन् तर पछि हट्ने पनि उनलाई मन थिएन । अन्ततः उनले त्यो नाटकमा काम गर्ने निर्णय गरे । त्यसका निम्ति उनी सडक बाटोमा हिँड्ने डुल्ने गरेका बृद्ध मानिसहरुको हाउभाउ नियाल्न थाले । दिनभरी सडकमा गएर वृद्ध मानिस खोज्थे र उनीहरुको व्यवहार नियाल्थे । विस्तारै उनले वृद्ध मानिसहरुसँग सम्बन्ध बढाउन थाले । पहिले भक्तपुर बसोबास गर्ने भएका कारण त्यस ठाउँका वृद्धहरुसँग नजिक हुन उनलाई केही सहज पनि भयो ।
उनी दैनिक रुपमा भक्तपुरको पाँच तले नजिकै जान्थे र दिनभरी त्यहीँका बृद्धबृद्धा हरु सँग बस्थे उनीहरुको जिवन शैलीलाई नियाल्थे र बेलुका घरमा आएर त्यही कुरालाई अभिनयमा उतार्ने प्रयास गर्थे  । उनका हजुरबुवाको स्वर्गवास भइसकेको थियो तर हजुरबुवाले उनीसँग गर्ने गरेको व्यवहार, उहाँको हाउभाउ उनको दिमागमा ताजै थियो । त्यससँगै दिन भरी भेट भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्झिन्थे । उनीहरुको बोल्ने, हिँड्ने, खाने सबै कुरालाई सम्झिन्थे र त्यही कुरालाई अभिनयमा उतार्ने प्रयास गर्थे ।
केही समय पछि उनले त्यो नाटकलाई प्रस्तुत गर्ने समय आयो । थोरै डर अनि धेरै साहस बोकेर स्टेजमा प्रस्तुत भए । पहिलो शो बाट नै उनले गरेको अभिनयको चौतर्फी तारिफ भयो । सो अभिनयका कारण सबैबाट प्रशंसा पाए । उनले आफ्नो अभिनय यात्राको टर्निङ पोइन्ट नै उनी यही नाटकलाई मान्ने गर्दछन् ।
–उज्यालाे र गफगाफ डटकमकाे सहकार्य
अन्तिम अपडेट: पुस २०, २०७५
‘जीरो’ फ्लप भएसँगै शाहरुखले छोडे आमिरले दिएको फिल्म
साउथका सुपरस्टार महेश बाबूको जोडी बन्दै कट्रिना केफ
पुस २९, २०७५ आइतबार
बाटाेमा बदाम खाँदै हिँडेकी युवती मन परेपछि बिहे गर्न यस्ताे उपाय गरेका थिए राजाराम पौडेलले
पुस २८, २०७५ शनिबार
कलंकी – कोटेश्वर सडकमा दुर्घटना बढ्यो
फोटो प्रदर्शनी गर्दै सगरमाथा आरोहण
संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती, पुस मसान्तसम्ममा गर्नुपर्ने काम ग...
माघ १, २०७५ मंगलबार
जीपले ठक्कर दिँदा बालकको ज्यान गयाे
प्रहरीको फोनले अपहरणकारीबाट बचे एक युवक
यस्तो छ विश्वसम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाको अवस्था
दोस्रो एक दिवसीय: अष्ट्रेलियाविरुद्ध भारत ६ विकेटले विजयी, श्र...
विद्युत प्राधिकरण भन्छ : लाइन काटिदिन्छौँ, कारागार कार्यालय भन्...
केयरगिभरको संख्या बढाउन इजरायल सकारात्मक
मोटरसाइकल र स्कुटरमा भाडा लिएर यात्रु बोक्न प्रतिबन्ध
चिडियाखाना पुगेका पारस खड्काले सोधे : गैँडाले किन खुट्टा खो...
सरकारी भवन अलपत्र छाडेर भाडामा वडा कार्यालय सञ्चालन !
जिरी नगरपालिकाले किवी खेती गर्ने कृषकलाई फलामे थाङ्ग्रा सहयो...
नाटा मिडिया अवार्डबाट सेजनका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप चापागाईँ सम्म...
हरिभक्त स्मृति पुरस्कार पत्रकार गणेश बिकलाई
दीपिकासँग विवाहपछि यी ३ कुरा गर्न रणवीरमाथि प्रतिबन्ध
डाक्टर केसीविरुद्ध इलाममा जुलुस
मन्त्रीबाट कुटिएका सचिव रातिदेखि नै अस्पताल भर्ना
१२ लाख पर्यटक आए भनेर मख्ख पर्ने कि उनीहरुले कति खर्च गरे भने...
डा.केसी फूलमाला लाएर शहर घुम्नुपर्ने, किन अनसन बसेको ?
‘उज्ज्वल थापाले गुरिल्ला शैलीमा पार्टी फुटाए’
कुखुराको ‘सेडुअल’ मा चल्ने तारा
टाउकोको हड्डी डिब्बामा बोकेर दुबईबाट फर्किए गजराज
माटो डल्ला पारेर गज्जबका भाँडा !
मलेसियामा बँधुवा पशुकाे जस्तै व्यवहार सहनुपर्‍यो
कतार पुग्दा फेसबुक र टिभीमा मात्र हरियाली देख्न पाइयो
पुस २०, २०७५ शुक्रबार
मलेसियामा तीन वर्ष : निल्नु न ओकल्नु जस्तो
पुस १७, २०७५ मंगलबार